Waxa aad xaq u leedahay adeegyo turjubaan iyo tixgalinno kale oo kuu suurtagalinaya inaad ka qaybgashid barnaamijyada iyo go’aamada Metro. Metro waxay adeecdaa dhammaan sharciyada takooris la’aanta ee federalka.
Adeegyada loo heli karo dadka aan si fiican u aqoon Ingiriisiga
Metro waxay bixisaa macluumaad ku saabsan barnaamijyada iyo adeegyada Metro oo ah Carabi, Shiine, Hamon, Jabaaniis, Kooriyan, Kaamboodhiyan Mon-Khamer, Rumaaniyan, Ruush, Soomaali, Isbaanish, Tagalog, Ukarayniyan, iyo Fiyetnaamiis.
Metro waxay su’aashaada ku saabsan barnaamij ama adeeg kaga jawaabi kartaa illaa 180 luqadood. Wac 503-797-1890 oo sheeg luqadda aad ku hadashid.
Haddii aad u baahan tahay turjubaan si aad uga qaybqaadatid kullan dadweyne, wac 503-797-1890 (8 gallinka hore illaa 5 gallinka dambe maalmaha shaqada) shan maalmo shaqo ka hor kullanka si loo tixgaliyo codsashadaada.
Helitaanka loogu talogalay dadka qaba naafooyin
Metro waxay adeegyo ama ku-talogalyo bixisaa marka ay ka codsadaan dadka leh naafooyin iyo dadka u baahan turjubaan marka ay joogaan kullanno dadweyne. Dhammaan kullanada Metro waxa lagu gali karaa kursiga curyaanka.
Haddii aad u baahan tahay turjubaanka luqadda calaamadaha ee maqal-laawaha ama gargaar isgaadhsiin, wac 503-797-1890 ama TDD/TTY 503-797-1804 shan maalmo shaqo ka hor kullan.
Waxa la sameeyo haddii aad qabtid cabasho?
Haddii aad rumeysan tahay in takooris ama cadaalad-daro lagugu sameeyay, waxa aad isticmaali kartaa xaqaaga inaad cabasho ka xereysatid Metro.
Si aad u soo gudbisid cabasho:
fbuuxi foomka ama warqadda cabasho ku saabsan takooris
ku dir iimaylka ah [email protected]
ama booqo xafiiska maamulka Metro ee ku yaala 600 NE Grand Ave. gudaha Portland.
Maxay yihiin sharciyadu?
Sharciga federalka iyo gobolka iyo habdhaqanada Metro ayaa sugaya in hawlgalada hay’addu ixtiraamayaan oo ilaaliyaan xuquuqda madaniga ee dhammaan deganeyaasha. Xeerarkaas waxa ka mid ah:
Title VI ee Xeerka Xuquuqda Madaniga ee 1964 waa sharci federal oo qabanaya barnaamijyada iyo adeegyada hela lacagta federalka. Wuxu cadeynayaa in qofna aan lagu sameyn karin takooris ama loo diidi karin anfacyo iyada oo sababtu tahay sinji, midab ama wadan asal.
Amarka Fulin ee Cadaaladda Deegaan (Executive Order on Environmental Justice) ayaa hay’adaha ku amrayaa inay gartaan oo wax ka qabtaan caafimaadka bini’aadan ee aan fiicnayn si sarena aan isugu dheelitirnayn iyo saameynada deegaan ee ay hawlgaladoodu ku leeyihiin dadyowga laga tiro badan yahan iyo dadyowga dakhligoodu hooseeyo.
Xeerka Maraykanka Leh Naafooyin wuxu mamnuucayaa takooris ku saleysan naafo. Muxuu
Title VI kaaga dhigan yahay?
Title VI iyo sharciyada la xidhiidha waxay rabaan in qof jooga gudaha Maraykanka aan, iyada oo sababtu tahay sinji, midab, wadan asal, naafo, cayn lab iyo dhedig ama da’, laga reebin ka qaybgalka, ama loo diidin anfacyo, ama aan si kale lagu sameyn takooris marka uu socdo barnaamij ama hawlgal kasta oo Metro uu federalku ku siiyay gargaar dhaqaale.
Marka la fiiriyo Title VI, haddii aanad ku fiicnayn Ingiriisiga, waxa aad xaq u leedahay gargaar aad ku heshid macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan Metro.
Metro waxay qadarinaysaa xaquuqda aadanaha
Metro waxay si buuxda u raacaysaa xeerka Title VI ee Sharciga Xaquuqaha Madaniga ah oo soo baxay 1964 kaasoo qasab ka dhigaaya inaan qofna laga saari karin ka qaybgalka, loo diidi karin gunnnooyinka,ama haddii kale lagula kici karin takoor ku salaysan isir, midab ama wadanka qofku u dhashay barnaamij kasta ama shaqo kasta kaasoo Metro caawimaad dhaqaale uga hesho dawlada federaalka.
Metro waxay si buuxda u raacaysaa xeerka Title II ee Sharciga Ameerikaanka Naafada ah iyo Qaybta 504 ee Sharciga Baxnaaninta kaasoo qasab ka dhigaaya inaan shaqsiyaad u qalmi lahaa adeegga laakiin naafo ah laga saari karin ka qaybgalka, loo diidi karin gunnooyinka, ama lagula kici karin takoor sabab la xariirta kaliya naafadiisa markuu adeeg u doonto barnaamij kasta ama shaqo kasta oo Metro caawimaad dhaqaale uga hesho dawlada federaalka ah.
Haddii aad aaminsan tahay in lagugu takooray helitaanka gunnooyinka ama adeegyada sabab la xariirta isir, midab, wadanka qofku kasoo jeedo, jinsi, da'da, naafo ama heerka dakhliga, waxaad xaq u leedahay inaad cabasho u gudbiso Metro.
Warcelin baa loo baahan yahay
Metro waxay ballanqaaday inay u adeegto dadweynaha iyada oo la isticmaalayo heerka ugu sareeya ee runta iyo ixtiraamka. Haddii aad haysid faalooyin ama talooyin ku saabsan sidii loo fiicneyn lahaa ballanqaadka Metro ee xagga takooris la’aanta adeegyada, ama sidii loo fiicneyn lahaa u adeegista dadka aan aqoon fiican u lahayn Ingiriisiga ama dadka leh naafooyin, waxa aanu jecel nahay in aanu war kaa helno. Fadlan faalooyinkaaga, oo ay la socdaan macluumadka la soo xidhiidhista, noogu soo dir iimaylka ah [email protected].